တိုကျို မက်ထရိုပိုလစ်တန် အစိုးရသည် တိုကျိုမြို့ရှိ အထူးမြို့နယ် ၂၃ ခုကို စီမံခန့်ခွဲပြီး တစ်ခုစီကို မြို့တစ်ခုစီ အနေနှင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ထိုဒေသသည် တိုကျိုမြို့တော် အပါအဝင် တိုကျို အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် ၏ အနောက်ဖက်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ် ၃၉ခု နှင့် တသီးတသန့် တည်ရှိနေသော ကျွန်းနှစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ အထူးမြို့နယ်များတွင် ရှိသော လူဦးရေမှာ ၈ သန်းကျော် ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် တစ်ခုလုံးရှိ လူဦးရေမှာ ၁၃ သန်းမျှ ရှိသည်။ ထို အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၄၇၉ ထရီလီယံ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် နယူးယောက်မြို့ကိုပင် ကျော်လွန်သွားကာ နယူးယောက်မှာ ဒုတိယနေရာသာ ရရှိသည်။
ဘုရင်က ကျိုတိုတွင် နေသော်လည်း တိုကျိုကို အများစုက ဂျပန်၏ မြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်လာခဲ့ကြသည်။ ၂၆၃ နှစ်ကြာသော် အခါ တော်ဝင်ထီးနန်း စိုးစံမှု ပြန်လည်ပေါက်ပေါက်ရေး အတွက် ရှိုးဂန်းတို့ကို တွန်းလှန်ခဲ့သည်။ ၁၈၆၉ခုနှစ်တွင် အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော မေဂျီဘုရင်သည် အဲဒိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တိုကျိုသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အချက်အခြာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ဘုရင်နေထိုင်မှုကြောင့် တိုကျိုသည် အများက သတ်မှတ်သည့် နန်းမြို့တော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယခင်က အဲဒိုရဲတိုက်သည် နန်းတော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တိုကျိုမြို့တော်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြို့တော် အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်မှာ စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး မက်ထရိုပိုလစ်တန် အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့သော ၁၉၄၃ ခုနှစ် အထိပင် ဖြစ်သည်။
တိုကျိုသည် ၂၀ ရာစုအတွင်း အဓိက ကပ်ကြီး နှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး နှစ်ခုစလုံးမှ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ၁၉၂၃ ခုနှစ် ဂရိတ်ကန်တိုး ငလျင်ကြီးဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျော် သေကြေ ပျောက်ဆုံး ခဲ့ရသည်။  အခြားတစ်ခုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တို့တွင် တိုကျိုကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရာတွင် လူပေါင်း ၇၅,၀၀၀ မှ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ သေကြေပျက်စီး ခဲ့ရပြီး မြို့တစ်ဝက်ကျော်မှာ ပျက်စီးခဲ့သည်။ ဟီရိုရှီးမား နှင့် နာဂါဆာကီ မြို့နှစ်မြို့ပေါင်း အဏုမြူဗုံးကြဲခံရခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှု ထက်ပင် ပို၍ များသေးသည်။
ပထဝီ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများ
တိုကျိုမြို့၏ ပင်မကုန်းမြေသည် တိုကျိုပင်လယ်အော် ၏ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့မှ အနောက်သို့ ၉၀ ကီလိုမီတာရှိကာ မြောက်မှတောင်သို့ ၂၅ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ချီဘာ ပရီဖက်ချာမှ အရှေ့ဘက်၊ ယာမနရှိ ပရီဖက်ချာက အနောက်ဘက်၊ ကာနာဂါဝါ ပရီဖက်ချာမှ တောင်ဘက်နှင့် ဆိုင်းတာမာ ပရီဖက်ချာက မြောက်ဘက် တို့တွင် နယ်နိမိတ် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ တိုကျိုပင်မကုန်းမြေကို အထူးမြို့နယ်များအဖြစ် ထပ်မံပိုင်းခြားထားပြီး အရှေ့ပိုင်းတစ်ခြမ်းနှင့် တာမာ ဒေသ တို့တွင် နေရာယူထားကာ အနောက်ဖက်သို့ ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။
တိုကျိုမက်ထရိုပိုလစ်၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသအတွင်းတွင်ပင် တောင်ဖက် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ အတွင်းတွင် ကျွန်းစု နှစ်ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အိဇုကျွန်းများနှင့် အိုဂါစာဝါယာကျွန်းများတို့ ဖြစ်ကြပြီး ထို ကျွန်းများမှာ ကုန်းမကြီးမှာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကျော် အကွာအဝေး အထိ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိသည်။ ထိုကျွန်းများနှင့် အနောက်ဘက်ရှိ တောင်များရှိသည့် ဒေသတို့ကြောင့် တိုကျိုမြို့၏ လူဦးရေ ဖော်ပြချက်သည် အမှန်တကယ် မြို့ပြနှင့် ဆင်ခြေဖုံးတို့တွင် ရှိနေသည့် လူဦးရေထက် လျော့နည်းနေသည်။
အနုပညာ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
Global city GDP rankings 2008-2025။ Pricewaterhouse Coopers။4May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 November 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sassen, Saskia (2001)။ The Global City: New York, London, Tokyo (2nd ed.)။ Princeton University Press။ ISBN 0691070636။
GaWC - The World According to GaWC 2008။ Lboro.ac.uk (2010-04-13)။ 2010-10-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
THE GLOBAL CITIES INDEX 2010။ Foreignpolicy.com။ 2010-10-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fawkes၊ Piers (2009-06-18)။ Top 25 Most Liveable Cities 2009 - Monocle။ PSFK.com။ 2009-07-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
McClain၊ James (1994)။ Edo and Paris: Urban Life and the State in the Early Modern Era။ Cornell University Press။ p. 13။ ISBN 080148183X။
Sorensen၊ Andre (2004)။ The Making of Urban Japan: Cities and Planning from Edo to the Twenty First Century။ RoutledgeCurzon။ p. 16။ ISBN 0415354226။
History of Tokyo။ Tokyo Metropolitan Government။ 12 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tipton, Elise K. (2002)။ Modern Japan: A Social and Political History။ Routledge။ p. 141။ ISBN 0585453225။
Rail Transport in The World's Major Cities (PDF)။ Japan Railway and Transport Review။ 25 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Saxonhouse၊ Gary R. (ed.) (2004)။ Japan's Lost Decade: Origins, Consequences and Prospects for Recovery။ Blackwell Publishing Limited။ ISBN 1405119179။ Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)CS1 maint: extra text: authors list (link)
Shift of Capital from Tokyo Committee။ Japan Productivity Center for Socio-Economic Development။ 25 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Policy Speech by Governor of Tokyo, Shintaro Ishihara at the First Regular Session of the Metropolitan Assembly, 2003။ Tokyo Metropolitan Government။3November 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။